नयाँ कार किन्ने सपना | Social Sciences and Humanity Studies Academic Blog
नयाँ कार किन्ने सपना
Posted in My life by Shekhar on February 20, 2009
कहिले होला पुरा नयाँ कार किन्ने सपना ??
नया कार चढ्ने धोको पनि पुरा भयो । अब भविष्यमा पैसा कमाए आफैले किन्नु पर्ला । यो कार त मेरो साथी सहानाको हो । मैले त यसो रमाईलोको लागी फोटो खिचेको मात्र थिएँ ।
« Politics: Claims and Counterclaims
डेढसालकी बच्ची : दैनिक २० रोटि »
आकार said, on February 20, 2009 at 10:45 am
डाइभर बनिहालेछौ !
साकार said, on February 20, 2009 at 10:59 am
शेखर जी ! यो त मामाको घोडा, मेरो ही.. ही.. भने जस्तो भएन र?
Shekhar said, on February 20, 2009 at 11:40 am
त्यस्तै त्यस्तै हो साकार जी ।
Ametya said, on February 22, 2009 at 10:50 am
यो साकार आकार को भाइ हो कि क्या हो ???
Shekhar said, on February 22, 2009 at 11:23 am
हाहा मलाई पनी यस्तै लाग्या थियो । आकार जी लाई सोधेपछि बल्ल थाँहा पाएँ ।
katuwal said, on February 22, 2009 at 1:17 pm
कार चढ्ने सपना देख्नेले अवश्य चढ्छ यार । सपनाहरु विपना बन्न धेरै समय लाग्दैन मात्र मेहनत लाग्छ कि कसो शेखर
Shekhar said, on February 23, 2009 at 1:32 am
हि हि त्यो कार त २९ लाखको थियो, त्यो कारको सपना चाहीँ विपनामा बदलिदैन जस्तो लाग्छ मदन जी ।